Ithini imilinganiselo yakwa-Airbnb, ibe zintoni ezilindelekileyo? - Iziko Loncedo lakwa-Airbnb
Ithini imilinganiselo yakwa-Airbnb, ibe zintoni ezilindelekileyo?
Ukuze sigcine ijelo lethu likhuselekile kwaye lithembekile, sikhuphe imilinganiselo kunye noko kulindelekileyo kubabuki zindwendwe nakubahambi.
Siyenze le milinganiselo sincedwa ngamava esinawo ekuqhubaneni nabantu abakweli jelo lika-Airbnb. Le milinganiselo yenzelwe ukuze kudityaniswe iipolisi esinazo zibe kwindawo enye eza kunceda amalungu akwijelo lika-Airbnb aqonde oko kulindeleke kuwo nokuba alindele ntoni kuthi.
Kuza kuqinisekiswa njani ukuba le milinganiselo iyasetyenziswa?
Isigqibo ngasinye sokusetyenziswa kwayo senziwa emva kokuhlolisiswa kakuhle kwemeko liqela lethu labantu abawazi kakuhle lo msebenzi nabaqinisekisa ukuba senza isigqibo esifanelekileyo. Indlela esenza ngayo xa kuye kwaphulwa omnye wale milinganiselo ixhomekeke ibe iza kuqhubeka ixhomekeke kubunzulu baloo mbandela. Siza kuzama ukujonga iimeko zengxaki nganye xa sifikelela kwisigqibo sokuba kuza kuthini ukuze kusebenze le milinganiselo, kodwa asikwazi kuchaza yonke into xa umbandela unobuzaza.
Ndingenza ntoni ukuba andivumelani nesigqibo?
Amaqela ethu ajongene nokusetyenziswa kwezi polisi, ayifundele le nto ibe ayazi kakuhle, kodwa ke basengabantu. Ngoko, kwiimeko ezinqabileyo, izigqibo ezingokusetyenziswa kwale milinganiselo zisenokungachani. Ukuba awuvumelani nesigqibo esisenzileyo, unako ukuqhagamshelana nathi kwaye siza kuphinda sisihlolisise isigqibo kakuhle. Akuzokuhlolisiswa imilinganiselo nezinto ezilindelekileyo.
Ngaba le milinganiselo ingatshintsha ekuhambeni kwexesha?
Sisoloko sifunda kwaye sikhula kwaye imilinganiselo kunye nezinto ezilindelekileyo ziza kutshintsha ekuhambeni kwexesha. Qinisekisa ukuba uyayihlola imilinganiselo ukuba unento ongayiqondiyo ngemeko ethile.
Ziziphi izinto ezisisiseko ezifunwa ngu-Airbnb kubabuki zindwendwe?
Fumana izinto ngokoluhlu oluthile kula macandelo eZiko Loncedo.
Ukulawula uhambo lwenkampani